MODDER ထပ်မံကျမှ4ထပ်မံကျ 76 အင်ဂျင်ကိုသူ့ရဲ့ VERSION ကိုဖြန့်ချိ - သတင်း - 2019
ထပ်မံကျ 4-76 ကိုခေါ်ဖက်ရှင်မှာတော့ဂိမ်းကစားသည့် NPC တာကိုမြင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစား, ဂိမ်း, အခြားကစားသမားကိုအတုယူတဲ့သူ, ဒါခေါ် griefers ရေလွှမ်းထိုးစစ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အဓိကဇာတ်ကောင်ကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ပို. ပင် adrenaline ထပ်မံကျ 4-76 စမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တခုအဏုမြူဗုံးအနီးပေါက်ကွဲခဲ့ထံမှမည်သည့်ယခုအချိန်တွင်သေဖို့စွမ်းရည်ကထပ်ပြောသည်။
ထပ်မံကျ 76 - စီးရီး၏ယခင်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်မတူပဲ, ကွန်ပျူတာ-controlled လူ့ NPC ရှိလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦး multiplayer အခန်းကဏ္ဍ-ကစားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တူညီသောကဒ်တွင်တစ်ချိန်တည်းမှာ 24 32 လူတွေကိုကစားနိုင်တော့မည်နှင့်စီမံကိန်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များထဲကတစ်ခုနျူကလီးယားလက်နက်များ အသုံးပြု. ဖြစ်နိုင်ခြေဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ထပ်မံကျသတင်းထုတ်ပြန်ချက် 76 နိုဝင်ဘာလ 14, 2018 စီစဉ်ထားသည်။